မိုးမခ၀င်း – မုတ်ဆိတ်မြေး အရေးတော်ပုံပဇာတ် – ၁ | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← သီးလေးသီးနဲႚ ဆေးရောင်စုံကူပည်သူႚဆိံ္ဋခံယူတော့မည်
တရုတ် အိုလံပစ် သပိတ်မြောက်လပ်ြရြားမတြငြ်ူမန်မာ့အရေးလည်း ရြေႚတိုးလာ →
မိုးမခ၀င်း – မုတ်ဆိတ်မြေး အရေးတော်ပုံပဇာတ် – ၁
မုတ်ဆိတ်မွေး အရေးတော်ပုံ ပြဇာတ် – ၁
“ ဂျိူးဇက်ပါးလ်မား – မုတ်ဆိတ်မွေးထားလို့ ထောင်ကျခဲ့သူ” … တဲ့
(စာတည်းမှတ်ချက် – ဒီပြဇာတ်ကို မိုးမခမှာ အပတ်စဉ် အခန်းဆက်အဖြစ် တင်ဆက်မယ် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ ဆန္ဒခံယူပွဲကြီး မီကောင်းပါရဲ့)
အခန်း – ၁
နောက်ခံဇာတ်ကြောင်းပြောသူ ။ ။ ဇာတ်လမ်းစပါပြီ။ မက်ဆက်ချူးဆက် ပြည်နယ်တစ်ခုမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ကျော် လောက်ကပေါ့…
ဇာတ်ကြောင်း ပြောသူ။ ။ ဟိုး…ရှေ့မှာ
ရက်ဘက်ကာ။ ။ (နူးညံ့စွာ)… ရှင်က ဘာကို ပြောချင်တာလဲ။
ဂျိူ။ ။ ငါ့မှာ အခု ဘာတာဝန်မှ မရှိဘူးဆိုရင် နေ၀င်သွားတာလေးကို ထိုင်ကြည့်နေတော့မယ်ကွယ်။ ကဲ – မကောင်းဘူးလား။
ဂျိူ။ ။ ငါက မင်း ယောင်္ကျား မဟုတ်လားကွဲ့။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီ.း….
ရက်ဘက်ကာ။ ။(ခေါင်းမာစွာ) ရှင်က? ကျွန်မယောင်္ကျား ? ဟုတ်လား။ (ရယ်မောလျက်) ရှင်က အယောင်ဆောင်ပဲ။ ရှင်က ဂျိူးဇက်ပါးလ်မား မဟုတ်ဘူး။ ရှင်ကသူနဲ့မတူပေါင်။ အရပ်ကတော့…တူပါရဲ့။ဒါပေမယ့်……
ရက်ဘက်ကာ။ ။အင်း….ကျွန်မ စဉ်းစားနေတာက…
ရက်ဘက်ကာ။ ။ ကျွန်မနဲ့ အလွန်ရင်းနှီးတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တူသလိုလို..။ ကျွန်မအကို ဖြစ်နိုင်တယ်။ … အင်း…အချက်တစ်ချက်ကလွဲလို့…
ရက်ဘက်ကာ။ ။ ရှင့်ရဲ့မုတ်ဆ်ိတ်မွှေးတွေ။ ရှင်သာ တခြားသောယဉ်ကျေးတဲ့ ယောင်္ကျားတွေလို အဲဒီဟာ ကိုဖယ်လိုက်ရင်တော့…ဒါဆိုရင်တော့…
ဂျိူ။ ။ ကိုယ်အခုပဲ ဟောဒီ ဖစ်ခ်ျဘတ်မြို့ရဲ့ မုတ်ဆိတ်ရိတ်သမားဆီ သွားလိုက်ပါ့မယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်တို့အ်ိမ်မှာ သံတွေလည်း ကုန်နေတော့…
ရက်ဘက်ကာ။ ။အဲဒါက…(ရယ်လျက်) ရှင်က လူဝိုင်းကြည့်ချင်စရာ ဖြစ်နေပြီရှင့်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယ်သူ့မှာမှ မုတ်ဆိတ်မရှိဘူးလေ။ ရှင်မုတ်ဆိတ်မရိတ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။
ဂျိူ။ ။နှစ်ပေါင်း တစ် ရာ….
ဂျိူ။ ။ လမ်းပေါ်မှာ ဘယ်သူမှ မတွေ့ပါလား။ မာတင်စလေတာရဲ့ စတိုးဆိုင် အရင်ကျော်ရမယ်။ ပြီးရင် နိဗ္ဗာန်ဆိုင်၊ ဖစ်ခ်ျဘတ်မြို့ဘဏ်တိုက်၊ ကေဆီစတုန်းရဲ့ အကျီဆိုင်၊ ပြီးရင်တော့ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဆိုင် ပေါ့။ အိမ်အတွက် သံ နည်းနည်းဝယ်ရမယ်။ ရက်ဘက်ကာ့ မီးဖိုချောင်သုံး လက်သုတ်ပ၀ါဝယ်ရမယ် ဆိုတော့………… မာတင်စလေတာ က သူ့ဆိုင်ရှေ့မှာ ထိုင်နေပါလား။ ဒီတော့…နှူတ်ဆက်ဦးမှ။
ခြံစည်းရိုးက ယိုင်နေပြီဆိုတော့ … သံနှစ်ဆယ်သားလောက်…
ဂျိူ။ ။ အာ … မနှစ်က ၀ါယာကြိုးတွေဝယ်ခဲ့တာ မှတ်မိမှာပေါ့နော်။….(အံ့သြသံ) သံ တချောင်းမှ မရှိတာလား ခင်ဗျ။
စလေတာ။ ။ (ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာ) ငါ့ကို မထိနဲ့။ ဘုန်းတော်ကြီး ထရပ်စ်က ခင်ဗျားဟာ လူရမ်းကား…
စလေတာ။ ။ငါ့နားက သွားစမ်း။ (အော်ဟစ်) ကယ်ကြပါ ကယ်ကြပါ ကယ်ကြပါဦး….
ဂျိူ။ ။ကျွန်တော့်ရဲ့ မုတ်ဆိတ်မွှေးတွေ? (ယခုမှသဘောပေါက်လာ) ခင်ဗျားဆိုလိုတာက… (အလွန်ရယ်ရသော ဟာသတစ်ခုကို ယခုမှမြင်တွေ့မိပုံ) ခင်ဗျား ဒါ အလေးအနက်တော့ ဟုတ်ပုံမရပါဘူး … (အလွန်ထိမ်းမရစွာရယ်) ပြီးတော့ ဘရားသား ထရပ်စ်…
ဂျိူ။ ။ အမလေး…ရက်ဘက်ကာတော့ ယုံမှာမဟုတ်ဘူး … (ရယ်လျက်) ငါ့မြင်းတောင် ယုံမှာမဟုတ်ဘူး။ သူက လူတွေ ဒီလိုပဲဆိုတာ တွေးမိမှာတောင် မဟုတ် …
ဂျိူ။ ။(ရယ်မောနေဆဲ) …ဒါဗီလေးရေ…. ဘယ်နှယ့်လဲကွယ့် ဒါဗီ ပရီရာ…
ဒါဗီ။ ။ဟို … ဟို …
ထရပ်စ်။ ။ (ထွက်လာ) ဟိတ် .. ခင်ဗျားတို့… ဒေးဗစ်…ဘာတွေ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်နေတာလဲ။
Posted by maungyit on February 28, 2008 in Short Stories